नेपाल आज | लिंगको आकारले यौन सन्तुष्टिमा फरक पार्छ ? रियालिटी यस्तो छ
लिंगको आकारले यौन सन्तुष्टिमा फरक पार्छ ? रियालिटी यस्तो छ
आइतबार, ११ भदौ २०७४ गते प्रकाशित - नेपाल आज (DR)
एजेन्सी । केही पुरुषहरुलाई आफ्नो लिंगको आकार प्रकारका कारण चीन्ता हुने गर्छ । कसैलाई त लिंग सानो र पातलो भएको भनेर सिन्ड्रोम नै देखा पर्छ । लिंगको आकारले यौनमा कति फरक पार्छ वा आफ्नो सेक्स पार्टनरलाई कति सन्तुष्टि दिन सक्छ भन्ने विषयमा अब चर्चा गर्नेछौं ।
लिंगको आकार र यौन सन्तुष्टिका विषयमा बेलायती अनुशन्धानकर्मीहरुले धेरैवटा अनौठा तथ्यहरु बाहिर ल्याए । जुन पढेर तपाई हैरान बन्न सक्नु हुन्छ । अध्ययनका क्रममा ६३ प्रतिशत पुरुषहरुले लिंगका कारण यौनमा समस्या महशुस गरे । जबकी ती सबैको लिंगको आकार औसत थियो ।
लिंग उत्तेजित भएको बेला यसको आकार ५ दशमलव ५ इन्चदेखि ६ दशमलव २ इन्चसम्म हुन्छ र गोलाई ४ दशलमलव ७ देखि ५ दशमलव १ इन्च हुन्छ । ८५ प्रतिशत महिलाले आफ्नो पार्टनरको लिंगको बारेमा गुनासो गरेका छैनन् । उनीहरुले यौन आनन्दमा लिंगको साइजले फरक नपार्ने उल्लेख गरेका छन् ।
यौनका लागि विभिन्न प्रक्रिया र चरणहरु पूरा गर्न जरुरी हुने उनीहरुले बताएका छन् । पुरुष स्वास्थ्यमा विद्यावारिधि डा. डेब्बी हरबेनिक भन्छिन्, ‘तरीका मिलाएर सेक्स गर्दा लिंको आकार जहिले पनि कम प्राथमिकतामा पर्छ । त्यसको खास अर्थ रहँदैन ।’
उनी भन्छिन,‘लामो र मोटो लिंगले महिलालाई आनन्द दिएको कसैले पनि भनेका छैनन् । मोटो लिंगले महिलालाई अर्गाजमबाट टाढा राख्छ । मुख मैथुन गर्दा, हस्तमैथुन गरिँदिँदा मोटो लिंग सजिलो हुँदैन । केही पुरुषहरु मोटो र लामो लिंग भगवानले दिएको बरदान ठान्छन् । तर वास्तविकतामा त्यस्तो केही होइन । यो गलत सोच हो ।’
महिलालाई आफ्नो पार्टनरको लिंग सानो लाग्छ भने त्यो बेला उनी माथि बसेर सेक्स गर्न सक्छिन् । त्यसले क्लिटोरिसमा ज्यादा घर्षण हुन्छ र आनन्द हुन्छ । अर्को सेक्स पोजिसन मिसिनरी पनि हुन सक्छ ।
यौन जीवनबारे केही तथ्य
के हो सेक्स कुलत?